Google Chrome wuxuu noo ogolaanayaa inaan dhoofino furaha sirta ah dhawaan | Androidsis
Eder Ferreño | | Noticias, Tababarada
Google Chrome waa biraawsarka heer sare ee qalabka Android. Marka laga soo tago inuu yahay kan ugu isticmaalka badan, waa tan ugu fiican ee ay ku qiimeeyaan dadka isticmaala. Sidoo kale, xaqiiqda ah inay ka timaaddo Google waxay ka dhigeysaa mid loo habeeyay isticmaalka qalabka Android. Marka lagu daro hubi inaad markasta la socotid oo aad la socotid marwalba astaamo iyo horumarin cusub. Hadda, imaatinka hagaajinta biraawsarka ayaa lagu dhawaaqay.
Una hab cusub oo lagu maareeyo furaha sirta ah ayaa ku soo dhacaya Google Chrome si dhakhso leh. Uguyaraan, tani waa waxa koodhka biraawsarka ee Android tilmaamayo meesha shaqadan laga helay. Maxay ku saabsan tahay
Google wuxuu ka shaqeynayaa qalab dhoofinta ereyga sirta ah. Waa hawl ina oggolaan doonta u maareeyno furayaasheena sirta ah qaab aad u fudud. Marka waxay u noqon kartaa ikhtiyaar ku habboon dhammaan adeegsadayaasha adeegsada furayaasha sirta ah ee bog kasta.
Fikradda ayaa ah in ay soo baxday fududahay in la maareeyo furaha sirta ah waana ku haynaa iyaga markasta oo aan u baahanahay. Sidoo kale, waxay u muuqataa taas Google Chrome wuxuu soo saari doonaa feyl xagee ku kulannaa oo leh dhammaan ereyada sirta ah ee bogagga shabakadda. Wax aad u faa'iido badan, inkasta oo ay khatarteeda leedahay. Nooca feyl ee uu ahaan doono wali lama shaacin, laakiin in dhamaan furayaasheena hal feyl hal meel lagu wada hayo waa khatar.
Maaddaama haddii qof uu marin u helo, cawaaqibyadiisu waxay noqon karaan kuwo dilaa ah. Laakiin, xilligan lama oga sida shaqadani ugu shaqeyn doonto Google Chrome. Marka waa inaan sugnaa shirkadda inay soo bandhigto macluumaad dheeri ah oo arrintan la xiriira ka hor inta aan la xukumin.
Imaatinkiisa wali waxba lagama oga. Si fudud ayey u imaan doontaa marka hore noocyada beta ee Google Chrome iyo mar dambe qaybaha xasiloon. Xaqiiqdii way wanaagsan tahay in la arko in biraawsarku sii wado inuu horumar ku sameeyo hawlgalkiisa si nolosheennu ugu fududaato. Waa inaan aragnaa sida qalabkani u shaqeeyo. Sideed u aragtaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Google Chrome wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhoofiso furaha sirta ah